Usoro Ego Mma Mma 2020: Hụ Usoro 15 Kachasị Ego Maka Oge A
Onye na-ewu ewu ejiji chọrọ agụụ maka ịkọ akụkọ na…
If enwere otu ihe isiokwu nke oge ọkọchị a, ọ bụ echiche ọkụ nke dị iche n'eziokwu na mwute nke oge a. N’ịchụpụ ụdị ebumnuche dị otú ahụ na ụzọ okike, ihe ọhụụ mara mma nke oge a na-eti mkpu ma na-achịkwa ya!
Site n'usoro etemeete anya dị oke egwu inye naanị nrịgo anya, na edozi isi na ngwa ndị a na-ewu ewu, n'oge okpomọkụ a na-ele anya na-ekpo ọkụ.
Ka anyị na-ewelite usoro oge anyị n'ụzọ dị egwu, ihe ndị a dị ugbu a na agụụ ntutu jisiri ike setịpụrụ ụkpụrụ ịma mma ndị ọhụrụ. Ha na-egosipụta ịnụ ọkụ n'obi maka okike n'agbanyeghị agịga iche, na mkpa ọ dị ịmakụ ịma mma na-adịghị.
Site na usoro eji egwu egwu na ihe osise dị ka ihe mkpuchi mmiri na akwa mmiri na-ese n'elu, na-edozi isi na ngwa ndị mara mma dị ka bantu mara na isi akwụkwọ, enwere omume na ebe a maka onye ọ bụla fashionista.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ma ị bụ onye nwere mmụọ zuru oke ma ọ bụ onye nwere mmụọ zuru oke ma ọ bụ nwunye eze, ihe gị na-eme ka ịdị mma gị bụ maka ọgwụgwọ!
Tracee Ellis Ross na -emegharị isi edozi isi Bantu
Site na ndị na-eme ihe nkiri gaa na ndị na-eme ememme, ọnọdụ ndị a zuru ụwa ọnụ n'ezie. Ndị na-ewu ewu dị ka onye omee America Tracee Ellis Ross na Nigerian-American mma YouTuber Jackie Aina, ahụla ndị a na-azọ ụfọdụ n'ime usoro ndị a.
Yabụ ma you na-eke bọọdụ ọnọdụ maka ihe niile mara mma mkpọchi mkpọchi, ma ọ bụ naanị na ị na - achọ ụzọ isi bulie egwuregwu gị mara mma ebe ị nọ na iche iche n'oge ọkọchị a, anyị ekpuchila gị.
Nke a bụ 15 n'ime nnukwu njiri mara mma maka Oge 2020…
# 1. Anya Anya
# 2. Kwesịrị Inner Corners
# 3. Pink dị mma
# 4. Akpụkpọ anụ ahụ
#BTS na @britishgq @gq 💓👑 skin on glossy! Ejiri m etemeete nke Micheala Coel 🤎
A post na-akọrọ site Bernicia Boateng Artistry (@berniciaboateng) na Jun 29, 2020 na 6: 28am PDT
# 5. Mpempe Mmiri
Etemeete Site Natachi
# 8. Braids Knotless na-ekwu okwu
Ya mere, ihunanya na braids a! Ọ batara ma rịọ maka Mbepụ akụkụ atọ maka braids anyị wee nyefee nke ọma! 💯 want chọrọ nke kacha mma, mgbe ahụ ị kwesịrị ị gaa na salonlọ Mmanya anyị! 🤗 9 Otunba Adedoyin Ogungbe Crescent, Lekki Phase 1, Lagos Nigeria. #MyExtensionz
A post na-akọrọ site Ntutu m & Mgbatị m (@myextensionz_ng) na Mar 9, 2020 na 4: 18am PDT
# 10. Ponytails
# 11. Obere okpu
# 12. Ndị isi
# 13. Isi scarves
# 14. Ckpụ ntutu
# 15. Isi okwu
Dezie Elfonnie: Ihe ngosi ise Ikwesighi ighagha Wig
na-akụta akụkụ ime Afros Anita na-achọgharị Bantu Knots bernicia boateng bobs okpokoro ịwụ Ihe Nlere Anya Apụta Fisayo Longe akpukpo aru ntutu ntutu isi isi ikpuchi isi isi jackie aina knotless braids ọhụụ kachasị mma ihe ohuru nke ugbo ohuru Lori Harvey makeupbynatachi Mbali Mkhize michaela coel mihali ndamase Mocheddah myextensionz_ng Nyané Lebajoa pink imecha ponytail Salem Mitchell Oge ọkọchị Tracee Ellis Ross lids mkpuchi Yariszbeth Itzel
Ndị a na-eme Ejiji Eke Heineken Emee Ememe 'Ekpebiri Ejiji'